Free Helios EA - Best Forex EA si | Ndị ọkachamara ọkachamara | FX Robots
Helios bụ ọkachamara Advisor dabere na nchịkọta akụkọ nke ọnụahịa ego.
Gịnị Helios EA?
Enweghị usoro ịzụ ahịa ize ndụ.
Na-arụ ọrụ na 4 na 5-digit quotes.
Ntughari profaịlụ nke otutu ihe.
Enweghị mfu ego na mberede.
Nhọrọ iji zụọ ahịa dị iche iche.
Ntughari ihe omuma na-eme nyocha data onyonyo.
Ole na ole ntinye aka.
Ọ dịghị mkpa ịhazi na ebuli - mkpụrụ ndụ algorithm emeworị ya maka gị.
Free Helios EA - Olee otú iji?
Tinye Helios na 6 eserese na M15 setịpụrụ oge: EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCAD.
Debe ihe ize ndụ, gbasaa na nhichapụ.
Kwe ka ahia.
Helios EA - Ngalaba mbata
n'ihe ize ndụ - profaịlụ njikwa ihe ize ndụ.
Tinye nza - edozi otutu nha. Na-arụ ọrụ naanị mgbe ịtọziri "Idozi otutu " profaịlụ na n'ihe ize ndụ.
Max gbasara - kacha ekwere ka a gbasaa maka imepe ihe. Ọ bụrụ na mgbasa ozi gị ugbu a dị ukwuu karịa uru a, a gaghị eziga iwu ahụ.
Ntughari Max - kachasị ka enyere gị aka.
Helios EA - ọdịiche dị n'etiti profaịlụ dị iche iche ize ndụ
Ọnụ ọgụgụ ahịa adịghị adabere na profaịlụ ihe ize ndụ, naanị ọ na-emetụta mpịakọta ahụ. Ya mere, profaịlụ dị iche iche chọrọ nkwụnye ego kachasị dị iche iche. A na-atụ aro ka ị jiri nkwụnye ego 1000 ma ọ bụ karịa maka Ịnwụ ma ọ bụ Ndozi otutu (0.01), ruo 30 000 maka Nchedo. Ọ bụrụ na ịnweghị nkwụnye ego dị otú ahụ, jiri cent akaụntụ.
Ihe profaịlụ n'elu Ọkara bụ profaịlụ na enwekwu ihe ize ndụ. Kpachara anya na ya ma gbanwee akụkụ nke uru ahụ.
Helios EA Free Download - Dị mkpa
Helios na-arụ ọrụ yiri Devicore, ma na-edozi Ụkwụ na-akwụsị ma na-erite uru dị iche iche, nke na-eme ka uru bara uru ma na-ebelata nkwụsi ike nke uru.
Kpachara anya nwere nsogbu dị elu karịa Ọkara! EA na - eme ka uru dị na nnukwu ihe ize ndụ dị elu, ma na-etinye ego ahụ na ihe ize ndụ ka ukwuu.
EA dabeere na nyocha nchịkọta akụkọ, n'ihi ya, nsonaazụ ahịa ga-abịakwute nsonaazụ ọchụchọ naanị na ọnụ ọgụgụ buru ibu (ihe dịka iwu nke ọnụ ọgụgụ dị ukwuu). EA nwere ike iweta otu ọnwa ma hapụ nnukwu ego n'ọnwa ọzọ. Ya mere, a na-atụ aro iji ya na abụọ 6 ego abụọ n'otu oge iji mee ka ọnụọgụ ahịa na ọnụọgụ dị iche iche.
Helios mepee ihe gbasara 1-3 n'otu uzo ego otu izu.
EA adịghị agbanwe ihe a na-eme ma ọ dịghị edebe iwu, wee nwee ike gbanyụọ n'oge ọ bụla n'enweghị nsogbu.
Biko jide n'aka na akaụntụ gị na-akwado ikpuchi. EA adịghị adabere na ịme atụmatụ, ma ọ nwere ike ikpokọta ọtụtụ nnwere onwe onwe na otu ụzọ ego.